Kufanele ngikhulume kanjani nommikazi wendawo yami ngokubungaza ku-Airbnb? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Mayelana nokubungaza – isihloko sosizo
Imithethonqubo nezimiso – isihloko sosizo
Imininingwane eqondene nendlu – isihloko sosizo
Kufanele ngikhulume kanjani nommikazi wendawo yami ngokubungaza ku-Airbnb? – isihloko sosizo
Kufanele ngikhulume kanjani nommikazi wendawo yami ngokubungaza ku-Airbnb?
Ngingacela ukuthi izivakashi ziqinisekiswe ngaphambi kokubhukha?
Yebo, ungakwenza lokhu ezimfunekweni zakho zokubhukha.
Kubhaliselwa mahhala ukubungaza indawo yokuhlala noma okokuzithokozisa kwe-Airbnb, njengamakilasi, uhambo, noma imicimbi yomculo. Funda ngez…
Yiziphi izinkinga zeziqondiso nezomthetho okumelwe ngizicabangele ngaphambi kokubungaza ku-Airbnb?
Uma unquma ukuthi uzoba umbungazi we-Airbnb yini, kubalulekile ngawe ukuqonda ukuthi isebenza kanjani imithetho edolobheni lakini.